Blog | Fikarohana manokana, trano tsy mahazatra amidy
Tanisao ny trano tsy manam-paharoa!
In Manoratra doka tena trano
Posted Enga anie 21, 2020
Lazalazao trano iray hamelomana azy io!
Describe your home to create an image of what it is like to live there. The goal of your real estate description is to emotionally transport house-hunters in such a fashion that they picture themselves in your home and on your grounds.
Na an-trano iray manandrana mivarotra amin'ny fanananao trano na tompona trano izay misolo tena ny tompon-trano ianao, dia mihoatra ny trano fotsiny ny trano iray. Ny trano rehetra dia manana tantara - na dia fananganana vaovao aza. Ny tantaran'ny tranobe iray dia manomboka amin'ny tany aoriny eo. Fa maninona no naorina tao? Inona no mahatonga an'io toerana io manokana na mahaliana? Misy fijery ve izany? Ao anaty tanàna manodinkodina, vato vetaola any amin'ny tanàn-dehibe iray, sa mandositra any amoron-dranomasina?
Ny famaritana ny tranonao na ny lisitry ny teny mandaitra dia afaka manisy fiovana rehetra
Misy fitaovana maro azonao ampiasaina hanoratana trano. Mifantoha amin'ny fananganana azy, ny maritrano, tantara, tompony, sns manomboka amin'ny toerana na toerana misy ahy aloha, avy eo dia miasa amin'ny lalana mankany anaty aho, izay hozaraiko aminao amin'ny lahatsoratra manaraka.
Ampiasao amin'ny famaritana ny tranonao
Miresaka momba ilay toerana hamaritana ny tranonao. Ao an-tanàna ve ny trano? Miresaka momba ny trano fisakafoanana eo amin'ny manodidina - "Cheers" raha toa ianao. Afaka mitaingina bisikileta amin'ny grocers maitso ve ianao? Raha manana havoana na havoana fananana io fananana io dia manana fijery na faritra misy zaridaina eo an-jaridaina na zaridaina misy lalana? Misy rano manondraka - dobo iray izay mitobaka na azon'ny tahiry. Azonao atao ve ny manamboatra sambo? Mampiasà teny mamorona. Ampiasao ny eritreritrao hamaritana trano.
Ny gully dia manolotra fahafahana iray ho an'ny tetezana tery.
Ireo mpividy dia mitady rano amin'ny karazany rehetra rehefa mividy trano. Misy tantsambo na creek anao ve - Ara-potoana na isan-taona? Voaroaka sa alaina ve ny fanananao? Moa ve ny fikolokoloana tsy ampy ve sa misy fivoarana ny fototry ny olona? Misy zaridaina maharitra mandritra ny voninkazo mamelana voninkazo misy anao? Moa ve ny tany sahaza sy mety amin'ny fitsarana tenisy pisinina? Moa ve mifanakaiky anao ireo mpifanila trano aminao ary tianao ve? Vonona ve ny fiaraha-monina misy anao? Afaka mahita ny mpifanila trano aminao ve ianao sa tsara tarehy amin'ny toerana misy ny zaridaina?
Ity manaraka ity dia ohatra iray a famaritana trano fampiasa teny ara-pihetseham-po. Mampiseho sary an-tsaina ny fametrahana izany, mihoatra noho ny trano. Ny famaritana ny fananana dia manan-danja indrindra satria mamela ny mpividy iray hahalala ny tantara sy ny fampiasana ny trano izay toeram-pambolena. Ilay trano mihitsy no tsy varotra. Tena zava-dehibe ny fitarihana ny famaritana ny fanananao amin'ny mpividy amin'ny tsara, fa tsy ny hamaritana ny fananana azy ireo fotsiny.
Ampiasao ny adjectif rehefa mamaritra ny tranonao - Ampiasao ny fihetseham-po
GRANDMA ALLISON's PLACE - 70 ACRES
Isaky ny alahady, dia mpanota ary olo-masina no niseho tao an-tranon'i Bebe Allison. Tsy misy fanasana ilaina, tsy misy mosary - akoho amam-bary, ovy masaka, okra namboarina, sy ny maro hafa. Malalaka ny lakozia ary isika rehetra no ilaina - biscuits mafana buttermilk mafana avy ao anaty lafaoro. Vavaka, afahano ny lovia - lasa daholo.
Ankizy rehetra na aiza na aiza, mandondòna varavarana, miafina ao amin'ny efitrano fatoriany ambony sy ambany. Rehefa any anaty fitoeram-bary lehibe ny lehilahy dia mifanakalo hevitra momba ny biby fiompy ary rahoviana na raha te-hanapaka ny hazo intsony. Ny vehivavy miala voly ao amin'ny lavarangana wraparound. Akondro vita amin'ny akondro ho an'ny tsindrin-tsakafo!
Manana olana amin'ny adjectives hamaritana ny tranonao?
Tandremo sao diso lenta ny tenanao mitovy! Tsara kokoa ny mampiasa ny teny hoe trano na tokantrano? Aza mampiasa ny teny hoe "trano", fa azonao ampiasaina ny teny hoe "trano" ao amin'ny famaritana anao. Manome hafanana sy fahatsapana izany ny fanananao. Ny teny hoe home dia mamaritra ny toetran'ny trano. Ny mpividy dia mila mifandray amin'ny filazalazana ary mahalala fa raha mividy ny fanananao izy ireo dia ho tsapan'izy ireo ao amin'ny "trano".
Miankina amin'ny karazan-trano na fananana, azonao atao ny manolo ireo teny ireo amin'ny toeram-piompiana, na trano kely, trano fonenana, manor na lapa. Mampiasà anarana famaritana izay mitombina ary manome sary marina ny zavatra tadiavinao ampitaina. Mampiasa aho Inspirassione.com ho fanampiana fanampiana amin'ny hevitra ho tonga amin'ny adjectif rehefa mamaritra trano. Manampy anao hisafidy “teny kanto” ilay tranokala. Azonao atao koa ny mandray soso-kevitra ho an'ny dikan-teny, ny fanononana anarana, matoanteny matoanteny amin'ny fiteny samihafa! Fanampin'izany, ny tranokala dia manome proofreading nefa mampiasa grammarly maimaim-poana aho!
“Ny trano dia vita amin'ny rindrina. Ny rindrina dia natao mba “hahitana” zavatra. Mividy ny rindrina sy ny rindrina "mitazona" ny eritrerintsika, ny fihetseham-ponay. Isika dia mamorona efitrano ao anatin'ny rindrina. Loko amin'ny nofinofinay ny rindrina. Rehefa lasa mirona amin'ny toetrantsika manokana ny rindrina - ny zavatra iainantsika dia miova ho “tranonay” ilay trano.
Rehefa manapa-kevitra ny hivarotra ilay trano isika dia mbola hitantsika hoe "fonenantsika" izany. Ny fahatakarantsika ny lanjany dia tsy hoe firy fotsiny amin'ny volantsika no nametrahantsika, fa ny "tenantsika" no namboarinay. Tsy tsapanay fa eo imason'ny mpividy fotsiny, dia mivarotra "trano" fotsiny isika, trano izay ametrahan'ny tompony vaovao ny toetrany - ary mitohy ny tsingerin-taona! ”
Mieritrereta mamorona horonantsary hilazana trano iray. Azonao atao ny manondro ny endri-javatra amin'ny fomba mahafinaritra nefa tsy hoe "salasitra" loatra ianao!
Tao anatin'ilay horonan-tsary etsy ambony dia nampiasa sary aho mamaritra ny trano fa ny filazalazana lava sy lava be. Mino izahay fa ny mpividy ho an'ity fananana ity dia mety inoana fa hampiasana azy io ho trano fialan-tsasatra. Efa manana doka voasoratra miaraka amin'ny angon-drakitra rehetra izahay fa te hanokatra ny mason'ny mpividy amin'ny mety ho mety hampiasaina amin'ny fananana. Nampiasa endri-tsoratra mahatsikaiky sy mahafinaritra sy mahatsikaiky kely aho ary niasa! Ary, satria teknika maivana izany dia tsy nahatsapa ny mpividy ny natosiky ny tahotra na natahotra ny hanantona iraka hijery ilay trano.
Mifalia rehefa manoratra ny trano fonenanao ianao! Aza matahotra hiteny avy amin'ny fonao. Mizarà tantara mba hahitan'ny mpividy fa miaina ao ary mamorona ny tantarany manokana izy ireo. Avelao maimaim-poana ny fihetseham-ponao ary hitondra ny fanananao amin'ny fiainana miaraka amin'ny famaritana fananana mahafinaritra
In Uncategorized, Trano maitso
Posted Desambra 28, 2018
Biophilic Design - Ampidiro ao an-tranonao
Ahoana ny fametrahana ny endrika biophilique ao an-tokantranonao
Ny fampiasana Biophilic amin'ny sehatry ny tokantranonao dia ampahany manan-danja amin'ny famoronana tontolo iainana matanjaka izay miara-miasa amin'ny biorhythms voajanahary amin'ny maha-olombelona. Eritrereto ireo fitsipika momba ny fanamboarana biophilika hampidirina ao an-tranonao. Misy ezaka mifantoka amin'ny fitondrana ny natiora ho ao anatin'ny fari-piainana mahazatra. Hahita aritin-tsakafo sy mpanakanto ao anaty aterineto ianao izay mampiditra ny faritra misy ny natiora ho any amin'ny sehatra an-habakabaka mba hamerenana ny olona amin'ny loharano voajanahary.
Inona no atao hoe biophilique?
Raha tsorina, Biophilic Design dia ny fampiharana ny olona amin'ny natiora ao amin'ny faritra misy ny tranony. Tsy hoe manampy trano fotsiny na mamorona rindrina velona fa mampiasa ny endrika voajanahary, endrika, ary loko ny natiora ho endrika fanorenana izay manohana ny fahasalaman'ny olombelona. Ny Design Biophilic dia mirakitra vohik'ireo zavatra ara-batana izay miara-miasa amim-pahavitrihana mba hamoronana fifandraisana amin'ny natiora ao anaty toerana iray.
Fantaro ny zava-mitranga any an-tokantrano
Misy ny roa dingana mivantana sy tsy misy indraindray fa afaka manana ny natiora ao an-tranonao ianao. Ny traikefa mivantana dia ahitana ny fijery ny hazavana, ny rivotra, ny rano, ny zavamaniry ary ny biby, ny toetrandro ary ny toetry ny natiora. Ny fanandramana fahazavana amin'ny alàlan'ny varavarankely dia mety ho traikefa mivantana avy amin'ny natiora ary koa manana trano aty amina toeram-ponenana.
Ny traikefa lava be teo amin'ny natiora dia mirakitra sary mihetsika zaridaina, fiainana, fitaovana voajanahary, ary loko, ary koa geometria voajanahary. Ny fanandramana ny natiora amin'ny alàlan'ny feon'ny renirano miboiboika na ny fanehoana tazo hazo ao an-tokantrano dia ho zava-mitranga voajanahary indraindray.
Ohatra natokana ho an'ny Biophilic
Ny windows dia ampahany manan-danja amin'ny Design Biophilic satria mamela ny fidirana amin'ny karazam-piainana samihafa mivantana. Ny famokarana varavarankely dia hamela rivotra madio hiditra ny tranonao izay hampifandray anao amin'ny natiora sy ny toetr'andro. Ny jiro masoandro dia hiditra ao an-tranonao ary koa ny feon'ny natiora toy ny vorona mpihinam-bitsika, ny oram-batravatra, na ny rivotra mitsoka. Ny fahazoana antoka fa ny varavarankelin'ny tranon'izy ireo dia mora mora hita, ary amin'ny fanamboarana tsara ny fampiasana matetika, dia tena ilaina amin'ny Biophilic Design.
Hamafiso ny sisin-tany
Mponina maro no mahita fa te-handany fotoana bebe kokoa eny ivelany. Ny faniriana dia mahatonga ny toerana ho an'ny fiainana an-tany tena manan-danja na dia ao amin'ny trano na trano kely faran'izay kely aza. Ny fananganana sehatra an-kalamanjana izay mora azo dia ampiasaina matetika ary hampifandray ireo mponina amin'ny fomba lalina. Ny fametrahana investisseur any amin'ny faritra ivelan'ny trano izay mahatsapa fa mahazo aina toy ny tokotany dia hanampy amin'ny fampivoarana ny sisintany eo anelanelan'ny trano anatiny sy ivelan'ny trano.
Ny fomba iray hafa hampidirana ny sisintany eo anelanelan'ny trano ivelan'ny trano sy trano dia azo atao amin'ny fampidirana ireo zavamaniry teratany any amin'ny faritra ao an-tranonao. Ny famokarana zavamaniry any an-trano, izay efa tsara ao amin'ny toetranao, dia hanampy anao tsy hankasitraka fotsiny ny natiora fa hijoro koa ny fiainana miavaka izay asehon'ny zavamaniry tsirairay. Ireo zavamaniry ao an-trano ihany koa dia manampy amin'ny fanentanana ny zavamaniry teraka ao amin'ny faritra izay hahafantaranao sy hampifandray azy amin'ny andavanandro.
Asio tarehy voajanahary
Ny iray amin'ireo fomba tsotra indrindra hanombohana ny fampidirana ny Biophilic Design ao an-tokantrano dia ny manampy ny endriny, endrika, ary loko voajanahary amin'ny fomba iray hankasitrahana ny natiora. Misafidy ny handao ny loko volomparasy na famolavolana loko voajanahary fa tsy hosodoko. Manalavira ireo tsipika mahitsy tsy mahazatra eo amin'ny fiainana fa manainga ny famoronana natiora miaraka amin'ny tsy fahalavorariana sy ny endrika. Ampidino ny tsipika voajanahary any amin'ny faritra misy ny tranonao amin'ny endriky ny lozam-pifamoivoizana, rindrina manda, na ny tapakila misy ny tapakila izay mamerina ny karazana hatsarana hitanao amin'ny toerana. Ampidiro ao an-tranonao ireo endri-tsoratra voajanahary, ka asehoy ny endriky ny onja, kiraro, na zavamaniry any amin'ny faritra maro ao an-trano.
Amboary ny firaisana eo amin'ny sehatra
Ary indray, ny Biophilic Design dia tsy misafidy iray amin'ireo lafiny ireo fotsiny mba hampidirana ao an-tranonao, fa kosa ny fitaratra ny singa maro miaraka amin'ny fomba mahavariana. Mifidiana zavatra entina hanampiana ny tokantranonao izay mahatsapa fa tsy ny anao ihany fa ny mifanitsy koa mba hahazoana tombony be indrindra. Andramo ny sehatra misy ny tokantranonao tsirairay dia samy manana ny singa Biophilic Design izay sady manintona no mahavariana mba hahitana ny firindrana ao an-tsaina sy ao an-tokantrano.
Misy lafiny maro amin'ny Design Biophilic izay mamorona fomba mahatalanjona amin'ny fifandraisana amin'ny natiora ao anaty sehatra anatiny. Diniho ireto torohevitra ireto mba hampidirana ny Design Biophilic ao an-tranonao mba hampiray saina ny natiora isan'andro.
Kena Morris dia mpandray anjara mavitrika, mpikaroka zaridaina, ary voninkazo izay tia mifampizara amin'ny fitomboan'ny natiora.
Posted Oktobra 20, 2018
Fividianana trano tsy manan-tsahala
Ny tendrombohitra any avaratr'i Karolambo Andrefana dia lalana mora avy amin'ireo tanàn-dehibe tahaka an'i Atlanta, Charlotte, Raleigh. Maro ny mponina efa manana fialantsasatra na fisotroan-dronono eto. Ny fifehezana ny hafanana mangatsiaka ary ny fialana amin'ny ala mikitroka amin'ny faran'ny herinandro dia fomba fanao mahazatra ho an'ireo mponina ao an-tanàn-dehibe.
Ny WNC tendrombohitra dia manolotra karazam-piainana tahaka ny lalao golf, ski and lake resorts, tanàna mipetraka any Asheville, any amin'ireo tanàna kely etletika akaiky, na hivoaka any amin'ny firenena ao anatin'ny 20 minitra fotsiny. Azonao atao ny manangona ny Trak'i Appalachian, manondraka ny renirano maromaro, na mitondra ny Blue Ridge Parkway, mba hanonona ny sasany amin'ireo hetsika an-jatony maro. Raha mijery ny olona ny zavatrao, tsy misy toerana tsara kokoa noho ny afovoan-tanànan'i Asheville! Safidy fidiram-bola avy amin'ny trano kely mahafinaritra, trano fisakafoanana an-davaka, toeram-pambolena organika, renirano mivezivezy any amin'ny trano fonenana lafo. Ny laharam-boninahitra rehetra dia aseho.
Ve ny Research
Rehefa mividy trano tsy manam-paharoa, indrindra satria ny faritra be tendrombohitra dia lehibe ary maro be ireo safidy, ireo mpividy potika avy any ivelan'ny faritra dia te-hanangona zavatra kely kely alohan'ny hanombohany ny fikarohana ny fananana tanteraka. Ny roa amin'ireo fiheverana manan-danja indrindra dia ny teti-bola sy ny karazana faritra izay tianao hiaina. Ohatra, tianao ve ny miaina akaiky ny fandefasana toy ny fiantsenana, trano fisakafoanana ary toeram-pitsaboana, sa ny fitiavanao ho any akaikin'ny fialam-boly fialam-boly toy ny fitsangatsanganana, fiarandalamby, sambo na skiing? Tsy voatery miavaka ireo fiarahamonina roa ireo satria maro ny vondrom-piarahamonina izay manana ny fandefasana maoderina sy fialam-boly mifanakaiky. Te hanapa-kevitra ihany koa ianao momba ny haben'ny trano tianao, anisan'izany ny isan'ireo efitrano sy efitra fialan-tsasatra ilaina.
Rehefa mividy trano tsy manam-paharoa, misy karazana fiaraha-monina izay tianao hipetrahana? Manana karazam-bolo betsaka izahay any amin'ny faritra misy tendrombohitra miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina mifantoka amin'ny hetsika fialamboly sasany toy ny skiing, golf, fitarihana sy fanjonoana ary sambo eny amin'ny renirano sy farihy. Misy ireo fokonolona mifantoka amin'ny zavakanto sy ny fiainana ara-panahy na holistic. Manana distrika manan-tantara izahay ary vondrom-piarahamonina marefo. Ny fiheverana iray hafa dia ny habetsahan'ny tany tianao. Eritrereto raha te hiaina ao an-tanàna ianao na tanàna akaikin'ny mpifanolo-bodirindrina aminao, na any amin'ny faritra hafa any ambanivohitra.
Ohatra fotsiny ireo sasantsasany amin'ireo teboka voalohany izay haniry ny handinika ireo mpividy alohan'ny hanombohana ny fikarohana ny fananana. Raha vao manana hevitra tsara momba izay tadiavinao ianao, fotoana hifandraisana amin'ny mpitsikilo iray na hanomboka hikaroka amin'ny aterineto. Ankoatra ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny "Finds ..." manokana, dia nametraka katala iray ny lisitra manan-tantara rehetra ao an-tendrombohitra, amin'ny toerana iray, ao amin'ny tranonkalanay.
Isika dia mamerina mijery ny lisitry ny fananana rehetra any an-tendrombohitra ary mamantatra ireo izay ho sokajintsika ho tsy manam-paharoa. Avy eo dia mamaritra azy ireo amin'ny fomba sy ny karazany ary mandamina azy ireo ho an'ny mpividy mba hijery ny SpecialFinds.com. Ireto trano ireto dia sokajina ho sokajy manaraka: Log de rustic Properties, Properties Historic, Water Front or Water View Properties, Properties Horse and Farms, Modern House Green Eclectic and Homes and Estates Luxury.
Ny SpecialFinds.com no hany tokana ahafahan'ny mpividy mahita ny fananana tsy manan-tsahala rehetra ao an-tendrombohitra, nefa tsy voatery hivezivezy noho ny tsy fahampian'ny trano tsotra hita amin'ny tranokala hafa. Azontsika atao ny milaza amin'ny alalan'ny fifamoivoizana ao amin'ny tranokala fa hitsidika ilay tranokala ny mpividy, matetika mijanona mandritra ny ora maro, mitady ny lisitry ny lisitra tsy manan-tsahala.
Mitadiava karazan-java-borona tsy anananay
In Uncategorized, Fivarotana trano tokana, Fandefasana propagandy tokana
Posted Septambra 1, 2018
Fandefasana trano tokana mivangongo - fomba fiasa
Ny famokarana trano tokana amidy dia ny fifantohana ara-barotra voalohany amin'ny Special "Finds ...".
Mampiasa fomba hafa tanteraka isika ... fomba fijery hafa, mba hahafantarana ireo mpihaza ao an-trano noho ireo toetra tsy misy ilana azy.
Rehefa mivarotra fananana tsy mahazatra, matetika ireo tompon-trano dia mahita fa ny fomba nentim-paharazana nentim-paharazana fotsiny dia tsy miasa. Ny "Finds" manokana dia sampan-draharaha momba ny varotra ho an'ny fananana tsy manan-tsahala izay mamolavola fomba fiasa mba hahazoana tokontany tsy manan-tsahala.
Ny "Finds ..." manokana dia sampan-draharaha ara-barotra sy dokam-barotra izay manokan-tena amin'ny fanampiana ireo tompon'ireo trano tsy manam-paharoa, ka manamarika sy mivarotra ny fananany. Ny masoivoho dia mampiasa teknolojika mahaleotena miaraka amin'ny fanentanana dokambarotra manerantany mba ahafahana mivezivezy malalaka ary hahatratra ny mety ho trano-mpihaza. Manamboatra fanentanana ara-barotra mahazatra izy ireo mba hahazoana karazana tokantrano mahatsikaiky.
Ny dingana voalohany amin'ny fikarohana "Finds ..." dia ny "manaisotra ny fahatsapana ny fananana." Ny sampana dia mamolavola tantara lava be izay nosoratana avy amin'ny fomba fijerin'ny trano. Ny trano dia nentina ary ny mpividy dia nentina tamin'ny alàlan'ny fananana avy any amin'ny toerana rehetra rehefa mamaky ilay tantara izy ireo. Ny mpividy dia afaka mahatsapa ny fomba itiavany azy ao an-trano sy eny an-kianja.
Avy eo, ny doka feno pejy dia napetraka ao amin'ny fanontana dizitaly ny New York Times, Ny Wall Street Journal, Robb Report, Mansion Global, Registri duPont, ary ny famoahana iraisam-pirenen'ny 120 iraisam-pirenena misolo tena ny firenena 60, anisan'izany i Azia, Eoropa ary Moyen Orient. Horonan-tsarimihetsika horonantsary HD sy horonan-tsary momba ny horonantsary Google Earth no noforonina sy ampiasaina amin'ny dokambarotra rehetra ary koa ao amin'ny LinkedIn, YouTube, Facebook ary ny media sosialy hafa.
Ny tranonkala tsirairay dia napetraka ao amin'ny tranokala manokana "Finds ...", izay misy ny firenena sy iraisam-pirenena manaraka ny mpivarotra tsy manan-tsahala. Ny pejy rehetra dia voadika amin'ny fitenin'ny mpamaky. Ity dia ampahany manan-danja amin'ny tetikady ara-barotra ilaina amin'ny famokarana tokotokony tokana!
Brenda Thompson, "Finds ..." manokana, mpanorina, filoha ary CEO no Talen'ny Marketing ao amin'ny New York Stock Exchange alohan'ny hidirana amin'ny indostrian'ny indostria ao amin'ny 1991. Nanangana "Finds ..." manokana tao 1995 izy ary nifantoka manokana tamin'ny varotra tokana tsy manan-tsahala sy ny famokarana tokan-trano nivarotra. Nampiasa sehatra famoronana izy hatramin'ny nanorenany ny orinasa.
Hoy i Thompson: "Ny tokantrano rehetra natolotro dia tsy manan-tsahala, avy amina vavahadin-trano vato ao amin'ny Reniranon'i Hudson any New York mankany amin'ny tranokala iray sy ny tranokely misy tavoahangy miloko miorina eo amin'ny rindrina any Caroline Avaratra. Rehefa vonona ny hivarotra aho, dia ny hany safidy hiantehitra amin'ny orinasa mahazatra ara-barotra. Vetivety aho dia nahita ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao ara-barotra ary izany fivarotana tokantrano tokana izany tany amoron-dranon'ny trano fandroana cookie dia soso-kevitra ho an'ny tsy fahombiazana. Avy eo aho nanangana "Finds ..." manokana mba hamenoana ny filàna ara-barotra amin'ny tsenambarotra tsotsotra iray amin'ny tsena tsy voavolavola amin'ny indostrian'ny trano. "
Ny "Finds ..." manokana dia sampana varotra sy dokam-barotra matihanina amin'ny fivarotana toetra tsy manam-paharoa. Ny foibeny ao Caroline Avaratra, ny "Finds ..." manokana dia manangana sy manatanteraka hetsika ara-barotra sy dokam-barotra ho an'ny fananana tsy manan-tsahala manerana an'i Etazonia sy manerana izao tontolo izao. Ny orinasa dia orinasam-barotra tsy miankina ihany koa any North Carolina sy Pennsylvanie ary maneho ny mpividy sy ny mpivarotra amin'ny fifanakalozam-bola tokana ao amin'ireo firenena ireo.
Jereo ny trano tsy manan-tsahala miavaka.
In Fivarotana trano tokana, Fandefasana propagandy tokana
Posted Aogositra 13, 2018
Misafidiana miloko lomore lomore
Inona no safidy tsara indrindra ho an'ny Color Swimming Pool Liner?
Recently, the owners of one of our luxury historic homes decided to investigate replacing the vinyl liner of their heated inground swimming pool to stretch out the time the pool could be used. The sellers looked at the benefits associated with choosing a different liner colors, specifically dark blue versus light blue.
This property sits is in the mountains of western North Carolina in the charming college town of Sylva. It is located less than an hour west of Asheville, and like Asheville, this property enjoys four distinct seasons – a short winter, long warm spring, short hot summer, and long warm fall.
Ny mpivarotra dia manana fianakaviana be dia be. Ny ankizy sy ny zafikely dia mpitsidika matetika ary mandany fotoana be dia be ao amin'ny dobo. In their quest for a different swimming pool liners, they discovered the following pros and cons:
fahadiovana - Misy loko marevaka marevaka ny lolo marevaka. Ny ranom-boankazo misy rano izay efa taloha dia somary maloto, fa ny ravina na ny loto ao anaty dobo dia nahatonga azy ho maloto, indrindra fa ny habetsaky ny korontan-drano teo ambany rano.
Temperature - Iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny alàlan'ny lokony vaovao ny loko fanangonam-borona dia ny fahatsapany ny hafanana avy amin'ny masoandro raha tsy mifanohitra amin'ny loko matevim-bolo taloha izay naneho ny masoandro.
Energy Savings - Manana fitaovana fantson-drano vaovao ity dobo ity fa noho ny loko vaovao misy loko fanamainam-pasika vaovao, tsy ampiasaina matetika ny fitaovana fampitaovana ary mampihena tokoa ny fampiasana entona entona!
Tampoka, tian-dry zareo ny loko vaovao misy loko marevaka. Manintona tsara ny dobo ny dobo any ivelan'ny trano. Ny dobo dia manasa be kokoa ary manana endrika misongadina bebe kokoa!
Hahafantatra bebe kokoa momba ity trano ity sy ny fananan-tany mahavariana izay amidy amin'ny $ 865,000:
In Fandefasana propagandy tokana
Posted Jolay 22, 2018
Famarotana trano Metafysika | Fivarotana trano tokana
Torohevitra momba ny fivarotana trano Metaphysical
fivarotana ny metafizika Ny trano dia manana fanamby miavaka. Misy trano eto amin'ity tany izay mihazona antso manokana ity. Matetika ny toerana misy ny trano dia manoloana ny tompona vaovao. Ny mpivarotra dia mety hahasarika ny dokam-barotra ho an'ny trano saingy tsy misy ifandraisany amin'ny toerana. Rehefa tonga ny mpividy marina dia zava-dehibe ny mamela azy ireo "hifandray" fa tsy hanery na hanosika tolotra.
Toy izany ny toe-javatra amin'ny iray amin'ireo lisitra "Finds ..." manokana ao 1192 Rabbit Skin Road any Waynesville. Ity trano ity dia manana tantara momba ny 'hitadiavana ny tompony manaraka'. Nandritra ny taona maro dia nahasarika ny sain'izao tontolo izao ity trano ity. Tany am-piandohan'ny taona dia io no tranon'ny mpanoratra sariaka, mpanoratra ary cosmic Greta Woodrew. Nanao fihetsiketsehana ho an'ny mpamorona ny Space Technology and Research Foundation (STAR) ireo mpitsidika malaza manerana izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao dia ampiasaina ho tranon'ny fianakaviana tsy miankina. Nahita trano tao amin'ny nofy ireo tompon'ireo tompona ireo ary nahatsapa antso mafy toy izany fa nifindra avy tany Florida izy ireo - tsy nisy fanontaniana nanontaniana! Hitany taty aoriana fa tao amin'ny 23 acres dia ny kristaly manasitrana ny aina sy ny vortex izay afaka nanokatra indray.
Rehefa mivarotra trano metafisika, dia zava-dehibe ny manaiky fa ny zava-drehetra dia avy amin'ny angovo ary amin'ny fifantohana amin'ny "fahatsapana" izay omen'ny trano, mety ho azonao hamela ny trano hisarihana ny tompony manaraka.
Raha manana fananana iray izay inoanao ianao dia manana antso manokana, raha sitrana na salama ianao rehefa mitsidika ny fanananao, dia mety hanana trano metafizika ianao!
Ny fiantsoana hery ambony kokoa hahitana ny mpividy manaraka dia afaka manampy. Mandehana eny an-kianja, mangina, misaintsaina ary mahatsapa fahatsapana manokana. Ny fanananao dia manana fanahy mety ho nisy teo alohanao. Midira ao anatin'izany amin'ny alalan'ny fihainoana sy fahatsapana.
Ny fivarotana trano metaphysika dia mety mitaky fotoana bebe kokoa sy toy izany, faharetana. Misorata anarana amin'ny fisehoan-javatra mampitomboana ny fisian'ilay tompona vaovao!
In Fivarotana trano tokana
Posted Aprily 14, 2018
Fihetseham-panoherana - Fandraisana trano mivonona hamidy
Alohan 'ny sy aorian' ny fananana trano efa vonona amidy
Ny fampiakarana ny antso dia tena manan-danja tokoa amin'ny fanomanana ny trano hivarotana. Mba hanatsarana haingana ny fahafahanao hivarotra ny tranonao haingana, ary ny hahatonga ny tranonao hivoaka amin'ny vahoaka, tsy maintsy ilaina ny mialoha ny hiantsoana mpandraharaha iray, mandany fotoana vitsivitsy mifantoka amin'ny fananihananao amin'ny trano ianao ary manomana ny tranonao vonona hivarotra. Ampahany lehibe amin'ny "fanapahan-kevitry ny Buyer" ny mpividy dia mitranga mandritra ny segondra vitsy amin'ny fanananao. Ny mpividy dia hahatsikaritra avy hatrany ny fangatahana ataonao. Ataovy azo antoka fa mahazo fahatsapana lehibe hatrany am-piandohana izy ireo. Jereo ny tranonao sy ny fanananao ny fomba fijerin'ny mpividy azy.
Dingana 1: Makà fitarainana - Mitaova ny tany
Fantaro ny fanatsarana ny fanananao amin'ny sisiny - "Curb Appeal", na, raha misy mpividy iray manatona an-tongotra, dia jereo avy amin'io toerana io. - Moa ve ny lalana mankany amin'ny fanamboarana? - Mamay ve ny lakandrano? - Misy kirihitra mila hazo na faty ve? - Manana fefy izay rava ve ianao, na pejim-panodinana na simba?
Dingana 2: Mankanesa ao an-trano, ary ny fidirana voalohany.
- Ny fanorenana tsara ve ny lalanao? - Misy boaty fako ve hita maso? - Moa ve ny varavarana mila hosodoko na fanamboarana? - Misy ronono mihazakazaka sy mitsofoka tampoka ve? Ny fampidirana zavamaniry vita amin'ny voankazo na voninkazo vaovao mankany amin'ny fidirana na ny tohatra dia manampy foana!
Dingana 3: Sokafy ny varavarana ary mijery ao anatiny.
- Miasa ve ny varavarankely? - Moa ve ny varavarana mihidy sy mihazakazaka mora foana? - Mihodina ve ny varavarana? - Misy varavarankely ve ao anaty varavarana na manodidina ny varavarana? - Moa ve ny fanamboarana fidirana, riatra na dobo madio? - Mitraka - misy tranokely ve?
Dingana 4: Mandehana ao an-tranonao
- madio ve ny varavarankely sy ny rihana? - Tokony hangonina ny kilaoty, ny tranon-kodiarana voadio. Ny efitrano dia tokony hanome fofona vaovao - tsy misy biby na fofona mifoka sigara! Raha ilaina, dia mampiasà vola amin'ny mpanamory ny efitrano mba hanafoanana ny fofona.
Dingana 5: Ampiasao ny lisitry ny lisitra malalaka
Ampiasao lisitra mitovy amin'ireto manaraka ireto, manomboka any ivelany ary miasa ao anatiny. Ireo fanapotehana ireo zavatra hitanao any amin'ny raharaha, ary raha misy ny olona omena azy ireo. Rehefa vita avokoa ny zava-drehetra - amin'ny famelomana ny fampiakarana anao, ary rehefa avy nandany ny dingana hafa mba hahazoana ny tranonao vonona hivarotra, tokony hijery tsara ny fanananao ka mety hanana hevitra faharoa momba ny fivarotana. Raha izany no izy, fotoana izao hiantso ny mpampitrosa anao! Download Ny tranokalan'ny Special Finds Sale Sale To-Do List ho PDF
Trano tsy mahazatra Asheville NC
Misy trano marobe tsy hita ao Asheville NC. Mazava ho azy fa ny mahazatra indrindra dia ilay malaza Biltmore Estate, laharana fahavalo Amerika Avaratra ny American Institute of Architects, ary mipetraka eo amin'ny tokotanin'ny 8000 sasany.
Nividy trano tsy mahazatra tao Asheville sy Hendersonville NC hatramin'ny 1995 aho, tena mahazatra ahy ny karazana fahafinaretana maro, tsy manam-paharoa, mahatsikaiky ary mahafinaritra ao amin'ilay faritra.
Jereo ity sari-tany ity mba hijerena ireo faritany manodidina.
Buncombe County - toerana Asheville dia hita;
Henderson County - any atsimo sy atsinanana miaraka amin'ny tanàna malaza Hendersonville;
Haywood County - any andrefana, miaraka amin'ny mahafinaritra Waynesville, 20 minitra fotsiny avy any Asheville;
Madison County - miaraka amin'ny fiaraha-monina kanto sy fambolena Marshall ary Mars Hill;
Polk County - miaraka amin'ny firenena soavaly Tryon;
Transylvania Ny kaominina - miaraka amin'ny tanàn-dehibe tsara tarehy Brevard, ary ny riandrano 250!
Yancey County - avaratra sy atsinanana, miaraka amin'ny Burnsville;
Tsy mila mandroso lavitra an'i Asheville ianao mba hitadiavana ireo toetra tsy manan-tsahala. An-tany toy izany no misy any Waynesville. Nanonona ny "Echo" avy amin'ny tompony, ity trano ity 326 Fomba fandefasana Wolf (tsy amin'ny GPS!) no nomena an'io anarana io satria nino izy fa "averina indray ny zavatra napetrakao amin'ny zavatra".
Miaraka amin'ny fefy 5800 metatra, io trano io miaraka amin'ny lakozian'ny tompon-daka matihanina dia manana ny zavatra rehetra azonao eritreretina fa sarobidy saika $ 300,000 amin'ny lanjany.
Trano maoderina amidy, Trano fonenana sy trano mimanda, Trano manan-tantara, Hazo sy fambolena, Country Farmhouses, Rindrin'ny rano na trano fijerena rano
Posted Febroary 13, 2018
Ahoana no hivarotana trano tokana
Raha manana fananana tsy manam-paharoa ianao, na tokantrano tsy mahazatra, azonao ny zavatra mampanahy amin'ny fivarotana. Fantatrareo izany, na dia ireo izay efa nitsidika ny toerana nitia azy aza, dia mety tsy nanana herimpo hividy azy io. Koa ahoana no hivarotanao fananana tsy manan-tsahala? Ahoana no ahafahanao manintona mpividy tsy manam-paharoa ho an'ny tokantrano tokana?
Miankina amin'ny fomba amaranao azy izany!
Trano tsy mahazatra no manintona mpividy hafa. Misy mpividy any, mikaroka zavatra hafa, zavatra mahazatra - fananana tsy manam-paharoa.
Izaho, izaho, dia nianjera tamin'io sokajy io. Tsy vitako ny namariparitra ny trano nokarohiko, satria tsy nahita izany aho. Fantatro fotsiny fa tsy mila trano fako cookie aho.
Taorian'ny nividianana trano fonenako voalohany, varavarana vato iray, nijery ny reniranon'i Hudson any New York, dia tsapako fa tokony hisy mpividy hafa toa ahy. Izany no antony nanombohako manokana "Finds ...", izay toerana fivarotanay tsy fahita firy.
Ny mpivarotra tokana tokana dia tsy mitovy amin'ireo mpividy hafa, satria mividy ny fihetseham-po izy ireo, mifantoka amin'ny "zava-misy" any aoriana - rehefa mifandray am-pihetseham-po amin'ny fananana. Noho izany ny mpitsikinao dia mila mamoaka dokambarotra momba ireo zavatra izay hifandraisan'ny mpivarotra iray.
Ity misy ohatra iray momba ny dokam-barotra nosoratako avy amin'ny iray tamin'ireo lisitra teo aloha:
Ny doka dia mamaritra ny tantaran'ity "Find ..." manokana ity. Io fananana tsy manam-paharoa io dia nanana tolotra maro ary namidy nandritra ny andro 3.
Ny varavaran-drakitra dia mitsambikina toy ny ankizy mandrehitra varavarana iray avy eo avy eo hafa. Ny fihomehezana dia maneno manerana ny trano rehefa milalao afenina ny ankizy - 'n-mitady any amin'ny gilasy. Maniry dite mihinam-boankazo amin'ny vatolampy eo amin'ny lavarangana lavalava. Ny lambam-pandriana iray dia manamboatra latabatra fisakafoana izay ahitana ny lemonade sy ny penina maka fanahy amin'ny mpandalo. Nostalgia Cottage dia niaina tantara ara-tsosialy maro izay nanangonana namana sy vondrom-piarahamonina isan-taona isan-karazany. Namboarina tamin'ny 1908 avy amin'ny fianakavian'i Tanner malaza, nipetraka teo amin'ny lalana teo amin'ny manodidina 3 izy. Vita fotsy mazava tsara, miaraka amin'ny tafo vaovao sy ny vaovao farany momba ny rafi-pitantanana, dia mandeha tsara ny fanavaozana azy. Ny rindriny mafy dia mitazona tantaram-pitiavana, fitiavana ary avonavona, miharihary amin'ny tsipiriany sasany amin'ny endritsoratra tany am-piandohana izay mbola mitoetra - hazo fotsy vita amin'ny hazo ao amin'ny toeram-pambolena Tanner, Tafavoaka ny fefy 11 ny tongotra, 4 ary ny efitrano fandroana 2. Ny lakozia dia nalaina tany am-piandohana ary mila fanamboarana fanavaozana tanteraka, kanefa ny efitra dia lehibe amin'ny efitra fisakafoana misaraka. Io trano io dia efa vonona sy mandroso an-dalam-pandrosoana mankany amin'ny fivarotana, trano fisakafoanana ary toeram-pitsaboana. Amin'ny alàlan'ny tongotra 2800 sasany dia hanao B & B mahafinaritra izy.
Angataho ny mpiasanao hilaza ny fanananao "ara-pihetseham-po", mba hahafahan'ny mpividy hahatsapa ny "tantaran" ny fananana, na ny fomba hiainana eo amin'ny fanananao, ary ao an-tranonao, na aiza na aiza misy azy ireo, raha mbola mamaky izy ny dokam-barotra anao.
Izany no ataontsika, amin'ny Special "Finds ...". Ary izany asa izany!
Ho an'ny hevitra hafa hanampy anao hivarotra ny fanananao manokana, vakio ny lahatsoratro: Ny fomba hividianana trano
Posted Janoary 12, 2018
Mpiara-miasa mianatra ny fomba hividianana trano ao amin'ny sekoly tsy miankina
Ny sasany taona 27 taona lasa izay, fony aho lasa mpandraharaha mpanamboatra trano vaovao, dia nianatra nividy trano aho. Ampitahainay tranobe dimy na enina ao amin'ny faritra iray izahay, izay mipetraka amin'ny lalana tokana.
Ny trano tsirairay dia samy manana ny endriny avy any ivelany. Ny sasany dia manana garazy sy / na maramara; Ny sasany dia nanana efitra fandroana na fandroana mihoatra noho ny hafa; fanavaozana ny sasany izay nanana trano hafa tsy - vaovao lakozia, upgraded fidiovana, sns Nianatra ny fomba vidin'ny trano, amin'ny alalan'ny fampitahana ny manodidina fananana ho any ny "foto-kevitra" trano - ny trano niezaka izahay mba hamaritana ny fomba Price. Nampiasa endritsoratra toy ny iray etsy ambany izahay:
Amin'izao andro izao, ny famaritana ny fomba hividianana trano dia mitovy tanteraka. Mety tsy mahita tranon-kalitaona eny an-dalambe iray ianao, na na dia eo aza izany fandrosoana izany, saingy matetika, afaka mahita trano mitovy ianao ao anatin'ny halaviran-tsaina. Ity fitsipika ity dia mihatra amin'ny fandefasana karazana marika marobe kokoa.
Raha vantany vao mametraka vidin-tsolika ianao, ny fitsipika ankamantatra dia ny lisitr'ireo trano kely lavitra noho ny vao haingana mpivarotra simba, ary ambany kely noho ny karazana azo oharina izay mavitrika amin'ny tsena. Izany dia tokony hanome ny tranonao ho moramora kely amin'ny fifaninanana.
Aza manadino ny fandaniana ny trano avo loatra mba hanonerana ny faniriana hifampiraharaha! Amin'izao andro izao, ireo mpanjifan-tserasera dia mivoatra, ary misy trano maro azo amidy noho ny tamin'ny taona maro.
Tsara kokoa ny fananana fampisehoana bebe kokoa sy toerana tsy dia lehibe loatra raha oharina amin'ny efitrano fifanakalozan-kevitra ary tsy misy famelabelarana!
Nosoratanay ity tranokely SteelMaster Quonset ity taona lasa izay. Fantatra amin'ny maha-trano tsy mahazatra azy any amin'ny faritra izany. Mazava ho azy fa tsy nisy tany azo tsapain-tanana na aiza na aiza, na dia tao amin'ny fanjakana NC aza.
Ny fanilihana ny fomba hividianana trano iray dia mety ho tena sarotra, indrindra raha manana trano tokana ianao!
Jereo ity ity Quonset Hôtô hafa ity izay amidy any Tennessee.
Ny famaritana ny fomba hividianana trano dia mora tsotra ho an'ny trano fananana fa trano iray tsy manam-paharoa dia mety tsy mitovy amin'ny fampitahana azy io. Trano tsy mahazatra dia tsy hita ao amin'ny fizarazarana na fivoarana. Indraindray dia ilaina ny miala lavitra any amin'ny faritra iray mba hitadiavana ny fananana mitovy ho an'ny "Find ..." manokana.
Ho an'ny hevitra hafa hanampy anao hivarotra ny fanananao manokana, vakio ny lahatsoratro: Torohevitra mba hivarotana zavatra tokana tokana
pejy	1 of	3
Fivarotana trano tokana
Fividianana tokana tokana
Fandefasana propagandy tokana
Manoratra doka tena trano